ကျေးဇူးတင်လွှာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ကျေးဇူးတင်လွှာ
Posted by ဆူး on Dec 19, 2011 in Critic | 40 comments
ဆူး စိတ်ကူး ကျေးဇူးတင်လွှာ
၁၈.၁၂.၂၀၁၁ (ဦးဖော ဘူဖေး ပါတီ)
ကောင်းမွန်လှစွာသော မြိန်ရှက်ဖွယ် အစား အသောက်များကို ကျွှေးမွေးသော ဦးဖောကြီးအားလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
မွေးနေ့မှန်း မသိပဲ အပြန်လမ်းမှ ပြောဖြစ်တဲ့ အတွက် စိတ်ကူး စိတ်သန်း ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ ဘာမှ အကောင်အထည် မဖော်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် ၀မ်းနည်းမိပါကြောင်း
တက်ရောက်ကြတဲ့ ခင်မင်လှစွာသော ဂေဇတ် မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများအားလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
နေရာ အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် ရှာဖွေပြီး စီစဉ်ပေးပါတော့ ဦးဘလက်နဲ့ ဦးနို တို့အား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
သီချင်း တပုဒ် ဆိုလိုက်တိုင်း လိုက်ပြီး လက်ခုပ်တီးပေးပါသော ပရိတ်သတ်များအားလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
အားလုံး ဆုံတွေ့ကြတဲ့ အခါ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ် မိတ်ရင်း ဆွေရင်းများကဲ့သို့ ရင်းနှီးခင်မင်မှု အပြည့်နဲ့ အပြန်အလှန် နွေးထွေးဖော်ရွေစွာ ပြောဆို နေကြတဲ့ အတွက်လည်း တကယ်ကို ပီတိဖြစ်မိပါကြောင်း။
အသွားအပြန် ကားဖြင့် စီစဉ်ပေးပါသော မောင်နှမ တစုနှင့် တကွ တစ်ယောက်တည်း မဖြစ်အောင် အဖော် တူတူ လိုက်ပေးသော ချစ်လှစွာသော သူငယ်ချင်းအားလည်း ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။
အသက်တွေ ကွာပေမဲ့ ဂုဏ်ငယ်သလို မထားပဲ တလေးတစား ဆက်ဆံပေးတဲ့ မိတ်ဆွေများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
စာပေ ကဗျာ စသဖြင့် အကြောင်းမျိုးစုံ ဆွေးနွေးပြီး ပြောရင်းနဲ့ မောသွားတဲ့ အချိန်မှာတော့.. အိမ်ပြန်ချိန် ရောက်လို့ ပြန်ခဲ့ပါကြောင်း။
လာမဲ့ နှစ်မှာ စားပွဲ တခု လုပ်ဖို့ တိုင်ပင်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း။
အကြောင်း အကြောင်းတွေ အနှစ်ချုပ်လို့ ကျေးဇူးတင်လွှာလေးကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါသည်။
ဆူး ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်ကြောင့် မပျက်မကွက် လာခဲ့ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း (သိသိကြီးနဲ့ မလာတဲ့ သူများကို လုံးဝ ကျေးဇူး မတင်ကြောင်း လာမယ်သေချာ ပြောပြီး မလာပဲ ပုန်းနေသူများ အပါအ၀င်)
ကျေးဇူးတင်တာကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျို့ ကျေးဇူးပဲ။
ကိုရှုံ မင်္ဂလာဆောင် ကျရင် အခမ်းအနားမှူး လုပ်ပေးဘို့ ကြားကနေ အကူအညီတောင်းချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
ကျုပ်ကလည်း ဘာမှမဆိုင်ပါဘဲ ကြားထဲကနေကျေးဇူးတင်ကြောင်း….
(ပွဲသွားတဲ့လူတွေ ပြန်ပြောပြတာ နားထောင်ပြီး ပီတိဖြစ်ရလို့ …)
ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အသစ်ထပ်မရေးတော့ဘူးနော် …
တစ်ယောက်တည်း မဖြစ်အောင် အဖော် တူတူ လိုက်ပေးသော ချစ်လှစွာသော သူငယ်ချင်းအားလည်း ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။
ဘီဒူ့ ကို ပြူးတာလဲ မီသိဘူးဗျို့။ ထူးတော့ ထူးတယ်။
ဆူး ရဲ့ သူငယ်ချင်းပေါ့.. ဆူး ရဲ့ ဘေးမှာ ထိုင်တယ် အရမ်းစကားများလို့ တရွာလုံးနားငြီးသွားတယ် မဟုတ်လား.. ဟိဟိ…
ကိုဘလက်ကလဲ ခေတ်နောက်ကျနေပြန်ပါပြီ …
တီဗီမှာကြည့်ကြည့်ပါလား … announcer လုပ်တဲ့အခါ အမြဲကြားနေကျ …
ဒေါ်ဆူးက announcer လုပ်ဖို့ လေ့ကျင့်နေတာ …
မမဆူးရေ မိုးစက်ဒီမနက် ၆နာရီမှာ ပြန်ရောက်တယ်
ညီမ က လာမယ် စာရင်းထဲ အမ ကို အစောကြီးကတည်းက မပေးထားဘူးလေ..
အဲဒါ ညီမ ကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။
မမဆူးရေ ..ဂီ နောက် ရက်ပေါင်း ၁၀၀လောက်ကျမှ ပြန်ရောက်မယ်…
ဘယ်သူမှ လာမကြိုဘူး ..:(
မပူနဲ့ ..မပူနဲ့ ..
ကိုခင်ရွှေ့ ကို ကြိုခိုင်းလိုက်ပါ့မယ်..ငွှ..ငွှ..ငွှ..
ကျန်သေးရင် နဲနဲကျွေးဘာ..ကျန်သေးရင် နဲနဲကျွေးဘာ..
ဆူးရဲ့ ကျေးဇူးတင်လွှာက ပြည့်စုံလွန်းလို့ ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး
နွယ်ပင်လည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးဝင်ပြောပါရစေ ……….
ဦးကြောင်ကြီး တဦးထဲပိုင် ဆမ်းမားပဲလေ့စ်ဟိုတယ်အား ရွေးချယ်အသုံးပြုပေးသော ဦးဖောနှင့်တကွ ကျွဲရောင်းလာသူ+ကိုလည်း အထူးဥပါကာရ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် လာမည့်နှစ်များတွင်လည်း ထပ်မံအားပေးကြပါအုံးဟု ဖိတ်ခေါ်လျက်
မိတ်ဆွေဖောက်သည်များအားပေးမှုဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ပက်ပုန်းအပန်းဖြေဒေသတွင် သမီးလေးများအား ပြန်လည်လှူဒါန်း ခွဲဝေပေးနေသော စေတနာ့ရှင်ကြောင်ကြီး…။ :cool:
နောက်နှစ် အလကား လုပ်လို့ ရအောင် စီစဉ်ထားပေး..
အဲလိုမှ အဖြစ်မရှိရင် စရိတ်ထုတ်ပေးဖို့သာ ပြင်ထား..
ညီသလားဟေ မောင်တို့ရေ.. နောင်နှစ် ကြောင်ကြီးကိုသာ ၀ိုင်းညှစ်ကြပါဗျို့..
ဦးကြောင်ကြီးလည်း ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းပိုင်လည်း ပါတယ်ဆိုတော့ကာ ဒီစာပြပြီး မနေ့က ဦးဖောပေးချေခဲ့ရတဲ့ ကုန်ကျငွေကို ဘော့စ်စာရင်းမှတ်လိုက်ပါဆိုပြီး သွားပြန်တောင်းရမယ်။
lone ကိုလည်းမဖိတ်ဘူး….ဟွန့်…စိတ်ဆိုးတယ်….. ခေါ်တော့ဘူး…
အန်တီတုံး ဖိတ်တယ် မဟုတ်ဘူးလားကွယ်..
လုံး ရဲ့ အီးမေး ဆူး ဆီမှာ မရှိဘူးလေကွယ်..
ဖိတ်စာကတော့ တခြမ်းစီဝေတယ်… ဆူး နဲ့ အီးတုံး ဖိတ်ပေးတာပဲ ကျန်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး တကယ်ပါနော်။
ဦးကြောင်ကြီး လုံးကလေးကို ထပ်ဖိတ်ပါတယ်ကွယ်။ ဘဲအိုဂျီးပါ ခေါ်လာခဲ့ပါ။ ကားစောင့်ခိုင်းဖို့လူမရှိလို့။။။ လုံးကလေးနဲ့ ဦးကြောင် မြစ်ကမ်းနံဘေးက တန်ဖိုးကြီးစားသောက်ဆိုင်တခုရဲ့ ဖယောင်းတိုင်မှိန်မှိန်လေးအောက်မှာ ဂီတသံငြင်ငြင်သာသာလေးနဲ့ တစားပွဲထဲအတူစားရင်း ကားပါကင်ကွင်းထဲမှာ မြစ်လေတဖြူးဖြူးနဲ့ တဂစ်ဂစ်မြည်အောင် ခိုက်ခိုက်တုန်ချမ်းပြီး ကားစောင့်နေရမဲ့ ဘဲအိုဘဲနာငတိဂျီး တယောက်ကို အရသာခံ ထိုင်ကြည့်ရအောင်။။။
အောင်မလေး မိလုံး .. ကလီကမာ မလုပ်နဲ့နော် .. ရွာထဲက ဒုတိယ မနှဲလေးမလုပ်နဲ့…
သူ့ဘာသာသူ ဘာကြောက်လို့ ဆိုပဲ …. မလာပဲနေတာကိုများ …
ကြောင်လေးလဲ မအားတဲ့ကြားက ရောက်အောင်တော့ သွားလိုက်မယ်ဟဲ့ ဆိုပြီးသင်္ဘောနဲ့ လိုက်ခဲ့တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့သင်္ဘောက စပုတ်တိုင်တွေကြိုးပြီး ဂွေကခွင်သွားတော့ မောင်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်၊
စာပို့ခတွေ ဈေးတက်သွားလို့ မပို့လိုက်ရဘူး။
ကျနော်လဲ သူများအလွှာနား ကပ်ပီးထပ်လွှာသွားတယ်
လေးဖောနှင့်တကွ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျုပ်ကတော့ ကျေးဇူးမတင်ဘူးဗျို့ 
ဒါပေမယ့် ဝမ်းတော့သာမိတယ် ။ မုဒိတာ ပွားမိတယ် ။
ဆရာ၊ ဆရာမတွေ တွေ့ဆုံပွဲမှာ
၀မ်းသာစရာ သတင်းလေး တခု ပြောပြချင်ပါတယ်။
အလှူရှင်များ နဲ့ မလှူရသေးတဲ့ လူတွေ မုဒိတာ ပွားပြီး စိတ်အားထက်သန်လာဖို့ ပြောပြလိုက်ပါတယ်။
ပန်ပန် ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းရဲ့နောက်ကမြေလေးမှာ အဆောင် ဆောက်စရာလေးရှိနေတယ်။
မလှူရသေးတဲ့ လူတွေ မုဒိတာ ပွားပြီး စိတ်အားထက်သန်လာဖို့ ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ ????
ဆူးမမရေ..စိတ်အားထက်သန်ရင် တတ်နိုင်သလောက် လှုလို့ရတယ် ဂလိုလားဗျ….
အဲလို ရည်ရွယ်တယ် ထင်လည်း အဲလို သဘော ဖြစ်အောင် ရေးပေးလိုက်တာပါ။
အလှူခံတာတော့ ဆူး အလှူခံတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဆူး လည်း အလှူထည့်ပေးလိုက်တာပါ။
အလှူခံတဲ့ မန်ဘာ တယောက်က ၀မ်းသာ ပီတိ ဖြစ်အောင် ရေးပေးတာကို ကော်ပီကူးပြီး ရေးပြတာပါ။ ဆူး နဲ့ အတူတူ လှူခဲ့တဲ့ သူတွေလည်း ဆူး ကဲ့သို့ ၀မ်းသာ အားရ ဖြစ်စေအောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လည်း ပါပါတယ်။
အိမ်က ကျေးဇူးရှင်က ရွှေစိတ်တော်တကယ်ညိုညင်မှာကြောင့်
မလာတာဖြစ်ပါကြောင်း အနူးအညွတ် ပြောလိုက်ပါတယ်နော်
စုံစုံကို မပြောတာ သေချာပါတယ်။
နာမည်စာရင်းကောက်တုန်းက မလာဘူး ဆိုတာ ပြောထားတဲ့ သူတွေပါပဲ စိတ်ညိုညင်တဲ့ အထဲ မပါဘူး။ စိတ်ချ.. လာမယ် ပြောပြီး စာရင်းပေးထားတဲ့ လူကို ပြောတာပါ။
ရွာသူားတွေစုံတယ်ပြောတော့ အားကျလာပြီ။ နောက်တခါစုံရင်တော့ လာနိုင်မယ် ထင်တာပဲ။
ဒီတစ်ခါတွေ့ဆုံပွဲလုပ်ရင်တော့ သူကြီး က မျှော်စင်ကျွန်းကို ငှားပေးထားမယ်ပြောတာဘဲနော်။
အင်း အားလုံး စုံစုံညီညီနဲ့ အတော့်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ ပွဲလေးကို ဖန်တီးပေးတဲ့ အဘဖောကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိသလို မောင်နှမများ ပျော်ရွှင်စွာတက်ရောက်ခဲ့တာကိုလည်း ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ ပွဲပြီးတော့ မြေနီကုန်းမှာ ဆက်လက်ကော်ဖီတိုက်တဲ့ လေးဖက်ကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောရင်းနဲ့ ဒီလိုပွဲလေးတွေ အမြဲတမ်းရှိစေဖို့ မျှော်လင့်နေမိပါတယ်။
အားလုံးလည်း နှစ်သစ်မှာ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေ
ပွဲကြီးပွဲကောင်း လွတ်သွားတယ်ဗျာ… တစ်သက်လုံး ရန်ကုန်မှာ ဖင်မြဲနေတဲ့ကောင်က အဲ့သည့်အချိန်ကျမှ အပြင်ရောက်နေရတယ်လို့… ဖိတ်ကြားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မဆူးရေ… ဦးဖောကြီးကိုလဲ ပြောပေးပါ… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ (မစားရပေမယ့်ပေါ့လေ)
တကယ်ကို မသိလိုက်ဘူး။ဘာမှန်းမသိပေမယ့် ဆူးရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်မို့ မဆီမဆိုင်ပြောချင်တာလေးဝင်ပြောသွားပါတယ်။
ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ် ဝေေ၀(ဝေးဝေး) စကားမပြောတာ
ဘာပဲပြောပြော မှော်ဆရာက တစ်သိန်းရသွားတဲ့အတွက် ပိုလို့တောင် ကျေးဇူးတင်ပါ၏